Kahor kulanka Juventus iyo Valencia …. Wax ka ogoow rikoorada cajiibka ah uu Ronaldo ku leeyahay kooxda reer Spain – Gool FM
Kahor kulanka Juventus iyo Valencia …. Wax ka ogoow rikoorada cajiibka ah uu Ronaldo ku leeyahay kooxda reer Spain
(Juventus) 26 Nof 2018. Cristiano Ronaldo ayaa isku diyaarinaya kulanka ay kooxaha Juventus iyo Valencia ku wada ciyaari doonaan habeen dambe tartanka Champions League, kadib markii uu kulankii lugta hore qaatay kaarka casaanka ama roosaha.
Ronaldo ayaa xiiseenaya inuu wajaho kooxda Valencia, mana ahan markii ugu horeesay maadaama uu mudo dhan 9 sano kaga hor imaanayay tartamada gudaha Spain waayihiisii kooxda Real Madrid.
Cristiano ayaa ka heysta kooxda Valencia rikoor gooldhalineed ee aad u wanaagsan, xili uu habeen dambe kahor imaan doono kulankiisii 20-aad, tan iyo bilawga xirfadiisa ciyaareed ee kubada cagta.
19-kii kulan uu Cristiano Ronaldo kahor yimid kooxda Valencia, wuxuu awooday inuu ka dhaliyo 15 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 4 gool kale, taasoo ka dhigan inuu ka qeyb qaatay 19 gool ay Real Madrid ka dhalisay Valencia, waxayna tirsiga boqoleyda ay cel celis ahaan ka dhigan tahay in uu ka qeyb qaatay goolasha kulan kasta.
Sidoo kale waxaa jira rikoor kale ee cajiib ah uu Cristiano Ronaldo ku leeyahay kooxda Valencia, dabcan taasoo ah inuusan ku fashilmin inuu gool ka dhaliyo xili ciyaareed kasta, mudada 9-kii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay, wuxuuna ka dhalinayay marka ay ugu yartahay gool.
Inkastoo uusan gool kasoo dhalinin kulankii lugta hore ee tartanka Champions League, kaasoo ka dhacay dalka Spain, hadana wuxuu fursad xoogan u heystaa inuu dhaliyo gool kulanka habeen dambe.
Laakiin Valencia ayaa ka mid ah kooxaha fara ku tiriska ah uusan Cristiano Ronaldo ka dhalinin goolasha saddexleyda ah, balse wuxuu ka dhaliyay 4 jeer ee goolsha loo yaqaano labaleyda, waxayna dhamaantood ahaayeen kulamada horyaalka La Liga, wuxuuna ku kala dhaliyay min 2 jeer ee ah garoomada kooxaha Real iyo Valencia.
Cristiano ayaa 19 kulan guul ka gaaray kooxda Valencia 11 ka mid ah, wuxuu barbaro kala kulmay 6 jeer iyo 2 guuldaro ah.
Thiago Silva oo shaaca ka qaaday hubkooda ugu weyn ay kaga hortagi doonaan kulanka Liverpool
Santiago Solari oo ku dhawaaqay liiska xidigaha Real Madrid kaga qeyb galaya kulanka Roma iyo LIX ciyaaryahan oo liiskan ka maqan